‘नासा स्पेस एप्स् च्यालेञ्ज २०२०’ नेपालका ११ समूह - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
‘नासा स्पेस एप्स् च्यालेञ्ज २०२०’ नेपालका ११ समूह
प्रकाशित मिति: 13 October, 2020 8:11 am
काठमाडौं,२७असोज। सरकारले जारी गरेको विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति २०७६ को मर्म अनुरुप नेपालले ‘नासा स्पेस एप्स् च्यालेञ्ज २०२०’ मा भाग लिएको छ । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाको आह्वानमा विश्वका २०० स्थानमा भएको यो प्रतियोगितामा नवप्रवर्तनमा रुचि राख्ने करिब ३५० भन्दा बढी नेपाली युवाले भाग लिएका थिए । नेपालमा यो कार्यक्रमको संयोजन नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) ले गरेको थियो । सात प्रदेशको आठ स्थानमा भएको कार्यक्रममा ५० समूहमा युवा सहभागी भएका थिए ।
देशव्यापी अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि २५ समूह छानिएको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यसबाट विश्वव्यापी अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि ११ समूह छानिएको छ । समूहमा रहेका युवाले विश्वव्यापी रुपमा रहेका समस्याका बारेमा आफ्ना सोच प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वव्यापी रुपमा रहेका स्वास्थ्यमा आम मानिसको पहुँच, मङ्गल ग्रहमा कसरी जाने ?, मङ्गल ग्रहमा कसरी बस्ती बसाल्ने ?, कोभिड–१९ सँग कसरी लड्ने ?, नासाले गरेका कामका बारेमा कसरी विश्वव्यापी रुपमा जानकारी दिने ? आउने पुस्ताका लागि पृथ्वीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ?, पृथ्वी र अन्तरिक्षलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? लगायत २१ विषयमा युवाले आ–आफ्ना सोच अघि सारेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेल, निर्णायक आस्था शर्मा, दीनेश भुजु, डा पुष्पराज आचार्य, अञ्जना सिंह लगायतले प्रतियोगितामा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । नासाले सन् २०१२ देखि यो प्रतियोगिता शुरु गरेको थियो । नेपालले सन् २०१३ देखि प्रतियोगितामा भाग लिन थालेको हो । त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित भएर मात्र प्रतियोगिता गरिन्थ्यो । सन् २०१७ सम्म अप्रिलमै प्रतियोगिता आयोजना गरियो । सन् २०१८ देखि अक्टोबरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न थालेपछि .त्यस समयमा नेपालीको महान् चाड बडादशैँ पर्ने भएकाले नेपालले भाग लिएन ।